कलाकार संघमा खै सेलिब्रेटी ? | Filmy Bazar in Nepal
कलाकार संघमा खै सेलिब्रेटी ?
फिल्मीबजार,२१ मंसिर २०७२,काठमाण्डौ ।
मंसिर २६ गते हुन लागेको कलाकार संघको १४ औ साधारण सभा तथा निर्बाचनमा सेलिब्रेटीको क्रेज अत्यन्त न्युन देखीएको छ । चुनाबी माहोल तातेर बैशाख-जेठको जस्तो गर्मा-गरम चल्दै गर्दा चलेका सेलिब्रेटीलाई भने साधारण सभा र चुनाबको रौनकले छुन सकेको छैन । यसो त कतिपय कलाकारलाई सो बारे कुनै अत्तोपत्तो नै छैन । गत भाद्र २३ गते हुने भनिएको चुनाब गैर कलाकारलाई सदस्यता बितरण गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निबेदन परेपछि प्रशासनले नै चुनाब रोकेको थियो । प्रशासनले छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिबेदन पेश गरेपछि ठुलो कसरत पछि अहिले चुनाब हुन लागेको हो ।
३१ जना कलाकार चुनाबी मैदानमा उत्रिएका छन् । आईतबार निर्बाचन समितिले उमेद्दवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ । जसमा सहकोषाध्यक्षमा नायिका नन्दिता केसिको मात्र उमेद्दवारी परेकाले उनी स्वत: सो पदमा आईसकेकी छिन् । यस पटकको चुनाबमा पनि चलेका सेलिब्रेटी नेत्रृत्व तहमा आउन सकेनन् । कलाकार संघलाई सेलिब्रेटीहरुको संस्थाको रुपमा लिने गरिए पनि सेलिब्रेटीको सहभागीता सिलो खोजे झै खोज्नु पर्छ । सेलिब्रेटी बिना नै राजनैतिक चलखेलकै कारण चुनाबि माहोल रन्कीरहेको सेलिब्रेटीहरु बताउछन् । यस पटक लय संग्रौला,रामकेशर बोगटी र बिशाल बिष्टले उमेद्दवारी दिएका छन् । यिनै तिन उमेद्दवार बाट एक जनाले नेत्रृत्व समाल्नेछन् । यद्दपी तिनै उमेद्दवारलाई सम्बन्धित क्षेत्रकैले चिन्दैनन् ।
लामो समय देखी टेलिभिजन कार्यक्रममा सकृय हुदै आएका लय संग्रौलालाई भने अन्यको तुलनामा चिन्नेहरु होलान । तर,बिशाल बिष्ट र रामकेशर बोगटीलाई वास्तबमा कलाकार नै मानिदैन । यि दुईलाई चिन्नेहरु बिरलै होलान् ।
अध्यक्ष पदका लागि नायिका करिश्मा मानन्धर आउने तयारी रहे पनि चलखेल हुने भन्दै उनि पन्छिईन् । करिश्माले त हिम्मत गर्न नसकेका कारण अन्य चलेका सेलिब्रेटीहरुले सो पदका लागि मुटु दरिलो बनाउन सकेनन् । यस्तै उपाध्यक्ष पदमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । उक्त पदमा ४ जनाको उमेद्दवारी परे पनि रेजिना उप्रेतीलाई मात्रै चिन्नेहरु होलान् ।तर,सानु ताम्रकार पुराना कलाकार भएकाले उनको अलग परिचय छ । यस पदमा पनि फलानो चाँहि सेलिब्रेटी हुन् भनेर भन्न सकिने अबस्था छैन् ।
महासचिब पदमा २ जनाको उमेद्दवारी परेको छ । लामो समय देखी टेलिभिजन सिरियलमा अभिनय गर्दै आएकाले सरिता लामिछानेलाई अधिकासले चिन्छन् । यस्तै सचिब पदमा पनि २ जनाकै उमेद्दवारी परेको छ । जसमा चेत बहादुर सिंहलाई पुरानो कलाकारको हैसियतले चिन्नेहरु छन् । तर,संघकै आजिबन सदस्य संजय खतिवडाले कहिले कुन फिल्म खेले उनैलाई थाहा नहोला । सुमन दाहालको निर्देशन रहेको एक चलचित्रमा उनले अभिनय गरे पनि सो फिल्म रिलिजको कुनै टुङगो नै छैन ।
यस्तै कोषाध्यक्ष पदमा २ जनाकै उमेद्दवारी छ । आकास बाबु खवास बर्तमान कार्यकालको पनि कोषाध्यक्ष हुन् । दुबै कलाकार सेलिब्रेटीको ट्याग बाट धेरै पर छन् । तर,सदस्य पदमा उमेद्दवारी दिएका कलाकारहरु भने सेलिब्रेटी ट्यागका नजिक छन् । शिबहरी पौडेल,शिबहरी नेपाल ‘बैरागी’,गजित बिष्ट,आशिष्मा नकर्मी,सबिन श्रेष्ठ,देबीराम पराजुली ‘भोक लाग्यो’,कबिता शर्मालाई भने सबैले चिन्छन् ।
यद्दपी पछिल्लो समय चलेका सेलिब्रेटी चुनाबमा सहभागी नहुदा चुनाबको रौनकमा कमि हुने निश्चित छ । चल्तीका कलाकारहरु करिश्मा मानन्धर,रेखा थापा,दिपक राज गिरी,दिपाश्री निरौला,प्रियंका कार्की,निशा अधिकारी,नम्रता श्रेष्ठ,आर्यन सिग्देल,जिवन लुँईटेल,सीताराम कट्टेल’धुर्मुस’, केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’,दह्याङ राई,केकी अधिकारी लगायत पुराना सेलिब्रेटी कलाकारको उमेद्दवारी नहुनाले संघ र सेलिब्रेटी क्रेजका बारे प्रश्न चिन्न खडा गरेको छ ।
कलाकार संघ सेलिब्रेटीको संस्था हो की राजनिति गर्ने थलो कलाकारले नै बुझ्न सकेका छैनन् । आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै गति हुने हो भने नाम परिबर्तन गर्दा कुनै फरक नपर्ला भन्ने किसिमको प्रतिकृया फिल्मीबजारमा चल्न थालेको छ ।
Previous: चलचित्र नचलेपछि निर्मात्री पुजना प्रधानले फेसबुक नचलाउने घुर्की
Next: ‘फन्को’को रोमान्टिक गीत ‘ठुङ्दे ठुङ्दे’ सार्बजनिक (भिडियो)